Smartline Vasia गाउँ होटल4* (ग्रीस, क्रेते।): अवलोकन, कोठा र समीक्षा
एकदम अक्सर मानिसहरूले समुद्रीतट रमाइलो गर्न चाहने, ग्रीस, अर्थात् द्वीप भागमा अस्थायी आश्रय चुनिएको। र के क्रेते को द्वीप भन्दा राम्रो हुन सक्छ? पछि सबै यहाँ सुन्दर समुद्री तट मात्र होइन, तर पनि प्राचीन मिथक को एनिमेटेड नायक र, पाठ्यक्रम, साँचो आतिथ्य को यात्री लागि प्रतीक्षा गर्दै।
टापुमा धेरै शहर र विभिन्न आकार र विभाग को रिसोर्ट होटल छन्। एक छुट्टी होटल जटिल लागि राम्रो स्थान Smartline Vasia गाउँ4* मानिन्छ।
निस्सन्देह, जब एक होटल अनुभवी पर्यटक छनौट कारक, यसको स्थान, यसको क्षेत्र मा खाना र आवास, मनोरञ्जन र सुविधाहरु को अवस्था सहित धेरै ध्यान ड्र। त्यसैले साँच्चै होटल र के तिनीहरूले यो स्थान पूर्व अतिथि बारेमा भन्न खोज्नु कसरी।
क्षेत्र के हो? स्थान र सामान्य जानकारी
निस्सन्देह, सुरू गर्न कहाँ यसलाई स्थित छ होटल जटिल Smartline Vasia गाउँ4* तथ्यलाई सामना गर्न छ? Crete, सुरम्य छुट्टी समुद्र तट Sissi टाढा छैन गाउँ - यो अन्य होटल, पसल, रेस्टुरेन्ट र मनोरंजन घेरिएको, यहाँ थियो र तपाईंले आफ्नो छुट्टी खर्च गर्न छ।
मा 25 मी त्यहाँ एक रोचक पर्यटक शहर छ एगिओस निकोलाओस को। खैर, द्वीप गरेको राजधानी, Heraklion शहर, त्यसैले टाढा पनि छैन - बारे 45 कि। एउटै विमानस्थलमा गर्न दूरी (को यात्रा लामो लिन छैन) हटाउन हुनेछ।
Smartline Vasia गाउँ4* होटल नै सादा तर अझै सुरुचिपूर्ण मा निर्मित सानो दुई-मंजिल्ला भवन को एक जटिल छ। निस्सन्देह, एकदम terraces, खेल को मैदानों, lawns, पूल र पनि एक निजी बगैचा ठूलो निजी क्षेत्र छन्। समीक्षा होटल मात्र होइन बाहिर तर भित्र सुन्दर देखिन्छ भन्छन्।
होटल Smartline Vasia गाउँ (ग्रीस): विवरण र जीवित कोठा को तस्वीर
होटल 100 कोठा छ मा - यो एउटा बेडरूम र विशाल जीवित कोठा समावेश मानक डबल कोठा, र विशाल परिवार कोठा छ। निस्सन्देह, आफ्नो निपटान मा तपाईं आराम र ताजा समुद्र हावा आनन्द उठाउन सक्छौं जहाँ सहज फर्नीचर संग एक विशाल बालकनी छ।
सबै कोठा गुणस्तर हस्तनिर्मित काठ फर्नीचर संग सुसज्जित छन्। निस्सन्देह, पाहुनाहरूको साँच्चै आरामदायी बसाइ बस असम्भव छ बिना घरेलू उपकरण, प्रदान गर्नुहोस्। तपाईं टिभी हेर्न, टेलिफोन र रेडियो प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। हावा-कंडीशनिंग प्रणाली, को गर्मी गर्मी समयमा अपरिहार्य छ - तपाईंको सेवामा। त्यहाँ एक संयोजन लक, जहाँ पर्यटकहरु कागजात र केही बहुमूल्य वस्तुहरू भण्डारण गर्न गर्छन एउटा सानो सुरक्षित छ। त्यहाँ कोठा मा एक ठंडा प्रणाली संग मिनी-पट्टी, तर पेय अनुरोध मात्र वितरित छन्।
बाथरूम उच्च गुणवत्ता सेनेटरी संग सुसज्जित छ। तपाईं एक विशाल शवर, शौचालय, सिंक र दर्पण रमाइलो गर्न सक्षम हुनेछ। थप सुविधा लागि, बाथरूम बाल dryers संग सुसज्जित छन्। तपाईं साथै उच्च गुणस्तरीय सौंदर्य उत्पादन सफा तौलिया, हरेक दिन प्रतिस्थापित जुन मा गणना गर्न सक्नुहुन्छ।
होटल मा भोजन
स्वाभाविक, बिजुली को प्रश्न हरेक पर्यटक को ब्याज छ। साइट मा Smartline Vasia गाउँ4* त्यहाँ धेरै खानपान प्रतिष्ठानबाट छन्। अतिथिहरूको, तिनीहरूलाई लागि सही योजना छनौट गर्न वा पूर्ण होटल मा भोजन त्याग्न मुक्त छन्।
मुख्य भवन रेस्टुरा Thalassa, जहाँ तपाईं अन्तर्राष्ट्रिय र ग्रीक भोजन को एक स्वादिष्ट चयन आनन्द छ। यो नाश्ता, भोजन र खाने बुफे होस्ट। समीक्षा मेनु राम्रो छ र खाना सधैं, ताजा flavorful हो र स्वादिष्ट छ भन्छन्।
को साँझमा, अतिथि निमन्त्रणा मधुशाला Pelagos, जहाँ तपाईं Cretan भोजन को सबै भन्दा लोकप्रिय व्यञ्जन आनन्द उठाउन सक्छौं। खैर, त्यहाँ अतिथि बाहिर भोजन त, एक आउटडोर छत छ। खाने को लागि, तपाईं आरामदायक इटालियन रेस्टुरेन्ट ला Trattoria मा जान सक्नुहुन्छ। साथै, होटल बारहरू (तिनीहरूलाई को एक पूल मा स्थित), जहाँ आगंतुकों प्रकाश नाश्ता, चिसो पेय र बलियो पेय आनन्द उठाउन सक्छौं को एक नम्बर छ।
जहाँ समुद्र तट खोज्न? समुद्र तट मा सुविधा र मनोरञ्जन
निस्सन्देह, क्रेते मा एक छुट्टी खर्च गर्न योजना, पर्यटक के किनारमा र होटल Smartline Vasia गाउँ4* बीच दूरी छ को प्रश्न मा रुचि। Sissi (Sissi), सबै भन्दा लोकप्रिय सार्वजनिक तटों को एक, लगभग 900 मिटर होटल जटिल देखि स्थित। यो एक सुविधाजनक बाटो हो, पर्यटक त स्थिर यात्राको फाटो छैन।
यहाँ vacationers सजिलै आरामदायक lounger र छाता भाडामा सक्नुहुन्छ - भाडा मूल्यहरु एकदम उचित हो। बैंकमा निरन्तर rescuers को टोली काम गरिरहेको छ। अर्को पट्टी एक चिसो पेय र केही नाश्ता गर्न अर्को स्थित छ। को पर्यटकहरु भन्न रूपमा, समुद्र तट धेरै सफा र सुन्दर, र सुविधाजनक र खाली समुद्र गर्न प्रवेश छ। यात्री बोटिङ, नाउ, पानी स्किइङ, विन्डसर्फिङ र अन्य पानी खेल जान सक्नुहुन्छ।
हामी एक अतिरिक्त सेवा आशा गर्न सक्छौं?
होटल मा Smartline Vasia गाउँ4* पर्यटकहरु बाँकी गर्न सबै गौण घरेलू समस्या द्वारा marred थिएन गर्न खोजे। यहाँ तपाईँले कक्ष प्रयोग गर्न वा लुगा इस्त्री दिन सक्षम हुनेछ। को सामान कोठामा बाँकी कुराको समयमा अनावश्यक। तपाईं पनि मुद्रा (सामान्य दर) आदान प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ। र होटल मा इन्टरनेटमा निःशुल्क पहुँच छ।
कर्मचारीहरु शटल सेवा वा ट्याक्सी व्यवस्था मद्दत गर्न सक्छ। होटल पनि कार र साइकलको भाडा प्रदान गर्दछ। पनि व्यक्तिगत चालक एउटा सानो शुल्क लागि भाडामा गर्न सकिन्छ। एक डाक्टर तपाईं कारण - खैर, स्वास्थ्य समस्याहरू जरूरी स्वागत बुझाउँछ।
Smartline Vasia गाउँ होटल3* (Crete, ग्रीस): कसरी आफ्नो स्वतन्त्र समय अतिथि खर्च गर्न?
यो अधिकांश समय समुद्र तट vacationers मा खर्च कुनै गोप्य छ। तथापि, तपाईं आनन्द र होटल मा हुन सक्छ। यो साँझ लेट सम्म अतिथि गर्ने रम्न, र त्यसपछि नृत्य र आराम गर्न एक स्थानीय रात क्लब आमन्त्रित एनिमेटरहरु को एक समूह रोजगारी प्रदान गर्दछ।
स्विमिंग पूल र पानी स्लाइडहरू र अन्य आकर्षण संग एउटा सानो पानी पार्क - - त्यहाँ मजा मात्र छैन बच्चाहरु, तर पनि वयस्क तपाईंको सेवामा। एउटा राम्रो समय फुटबल खेल्दै हुन सक्छ। पनि क्षेत्रमा यो एक ठूलो, पूर्ण सुसज्जित जिम संग सुसज्जित छ - यहाँ आगंतुकों जानुहोस् र दिन को कुनै पनि समय हेर्न सक्नुहुन्छ। एक स्पा, जहाँ अतिथि मालिश धेरै प्रकार सहित स्वास्थ्य र सौन्दर्य उपचार, प्रस्ताव भ्रमण गर्नुपर्छ।
सभ्यता को पालने - र क्रेते को द्वीप देखि, यात्रा बारे मा भूल छैन। त्यहाँ एक नजर लायक छन् कि धेरै संग्रहालयहरु, वास्तु र ऐतिहासिक स्मारक हो।
संग बच्चा बिदाको लागि अवस्था
त्यहाँ पर्यटकहरु आधुनिक सुविधा र मनोरञ्जन को धेरै प्रस्ताव हो किनभने होटल जटिल Smartline Vasia गाउँ4* बच्चाहरु संग एक छुट्टी खर्च गर्ने निर्णय गर्ने आमाबाबुको लागि सिद्ध छ। निस्सन्देह, कोठा एक खाट ल्याउनेछ र रेस्टुरेन्ट सधैं बच्चालाई लागि स्वादिष्ट कुरा टिप्न गर्न सक्नुहुन्छ।
हरेक दिन, छोराछोरीलाई कहाँ तिनीहरूले कला, खेल मा संलग्न छन् एक बच्चाको क्लब, उपस्थित गर्न सक्नुहुन्छ, र बस अनुभवी शिक्षकहरूलाई र animators को कम्पनी मा मजा छ। बच्चाहरु विशेष खोक्रो पूल मा वरिपरि छप प्यार जहाँ पानी सधैं न्यानो छ। र आफ्नो बच्चा swings र रोचक आकर्षण संग ठूलो खेल मैदान मा समय खर्च गर्न राम्रो हुनेछ।
पर्यटकहरु यस होटल बारेमा बोल्न रूपमा?
यसलाई सधैं तिनीहरूले होटल Smartline Vasia गाउँ4* को पूर्व अतिथि लाग्छ के सिक्न रोचक छ। समीक्षा, खैर, सकारात्मक। होटल यस होटल तपाईं टाढा आरामदायक र रोमाञ्चक ब्रेक लागि आवश्यक सबै प्रदान गर्दछ, साँच्चै राम्रो र राम्रो-मैत्री वातावरण छ। पनि राम्रो सजाया छन् कोठा - आरामदायक फर्नीचर, राम्ररी काम गरिरहेको घरेलू उपकरण, को नौकरानियां साँच्चै राम्रो सफा छन्।
भोजन हुनत मेनु कहिलेकाहीं केहि monotonous छ एकदम राम्रो। तट सानो देखि दूरी। होटल को फाइदा छ र बच्चा संग बाँकी अवस्थाको, यो प्रत्येक कोठा अभिभावक लागि महत्त्वपूर्ण छ। यात्री होटल Smartline Vasia गाउँ4* सुझाव दिन्छौं। Sissy - एक अविस्मरणीय समुद्र तट छुट्टी को लागि एक ठूलो ठाउँ। हो, र एक होटल मा छैन पनि महंगा रहनु पर्छ।
नीलो शेल Resort4* (भियतनाम)। समीक्षा
Serhs Sorra Daurada होटल3* (स्पेन / कोस्टा डेल Maresme) - फोटो, मूल्यहरु, वर्णन, अतिथि को समीक्षा
भिबोर्ग मा सबै भन्दा राम्रो होटल: आवास, फोटो, पर्यटकहरु को समीक्षा
रातो ग्रह पटोंग3* (थाईल्याण्ड, फुकेत): होटल, सेवा, समीक्षा को विवरण
एक चुम्बकीय छेस्कनी के हो?
बच्चाहरु र वयस्क लागि डबल साइकिल। नाम डबल बाइक के हो
आरोपण रक्तस्राव वा अवधि: भेद कसरी?
वितरक: यो के हो? अर्थ
संगठनको मिशन एक साधारण ल्यान्डमार्क हो
"फोर्ड ट्रान्जिट" को परिवार। समीक्षा
सौंफ - एक अद्भुत बोट
चरण को कार्यान्वयन लागि विचार र सिफारिसहरू: मा घर प्रेत मेकअप
जहाँ डन मा नदी empties: योजना। नदी डन कहाँ स्रोत?